November 2021 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Nov 30, 2021 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 26-04-1443,…
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Talaado, taariikhda hijriguna…
Maxkamadda Islaamiga ee Banaadir Oo Xukun kasoo Saartay Dhul lagu muransanaa.
Maxkamadda Raddul Madaalim ee wilaayada islaamiga ah ee Banaadir ayaa xukun sharci ah kasoo saartay dood sanado badan soo jiitameysay oo ku aadan dhul ku yaala degmada Yaaqshiid. Maxkamadda Islaamiga ah ayaa waxaa dacwad keensaday dad ku…
Hooyo Soomaaliyeed Oo Gowracday Wiil ay dhashey. (Dhagayso Dhacdo Naxdin leh)
Wadanka Maraykanka waxaa ka dhacday arin la yaab leh, kadib markii hooyo Soomaaliyeed ay gowracday wiil yar oo iyadu dhashey. Hooyada falkan naxriis darrada ah geystay ayaa la sheegay in marka ay gowracday wiilka kadib ay ku riday…
Duqeyn Culus Oo lagu garaacay Saldhiga ciidamada Jabuuti ee Jalalaqsi.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee katirsan milliteriga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa duqeyn xoogan waxay ku garaaceen saldhiga ciidamada Jabuuti ee degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Madaafiic dhowr ah ayaa ku…
Weeraro ka dhacay gobollada Bay iyo Shabeellaha Hoose.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qaaday silsilado weeraro ah oo lagu beegsaday ciidamada Dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed. Gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayay ciidamada…
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Tallaado taariikhda hijriguna waxay ku…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 25-04-1443,…